Dalka Austria oo sharci Muslimiinta ka dhan ah meel mariyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dalka Austria oo sharci Muslimiinta ka dhan ah meel mariyey
Dalka Austria oo sharci Muslimiinta ka dhan ah meel mariyey
February 26, 2015 - By: Abdirizak Shiino
Vienna: Baarlamaanka dalka Awsteeriya ayaa maalintii arbacada meel mariyey sharci cusub oo dood badan dhaliyey, kaas oo mamnuuc ka dhigaaya in Hay’adaha Islaamiga ah ee Shisheeye aysan wax deeq ah ku bixin karin Muslimiinta dalkooda jooga. Sharcigan cusub ayaa sidoo kale dhigaaya in Imaamyada masaajidu ay khudbadohooda ku akhriyaan afka Jarmalka ee dalkaas looga hadlo, waxna ka bartaan dhaqamada Awteeriyaanka.
Sida laga soo xiganayo Wasiirka is-dhexgalka dalkaas Sebastian Kurz, waxa sharcigaan riixayaa in laga hortago xagjirnimada.
– Waxaan dooneynaa mustaqbalka in imaamyadaya Awsteeriya ay ku koraan dhaqanka dalkan ku hadlaan luuqada Jarmalka, tusaale wanaagsana u noqdaan dhalinta muslimiinta ah ee soo koreysa ayuu yiri Sebastian Kurz.
Sharcigan cusub ayaa sidoo kale xuquuq siinaya Muslimiinta. Waxaa ka mid ah in Muslimiintu xaq u leeyihiin in ay fasax qaataan maalmaha barakaysan sida Ciidaha & Jimcaha, sidoo kale in ay taageero ku heli karaan isbitaalada, goobaha dadka waaweyn lagu hayo iyo xabsiyada.
Muslimiinta ku dhaqan dalalka reer Galbeedka ayaa taageerada ugu badan ka hela dalalka Muslimiinta hay’adaha ka dhisan, sida marka laga hadlaayo dhismaayaasha Masaajidda iyo xarumaha waxbarasho.
Ururka Muslimiinta ee dalka Awsteeriya ayaa sharcigan cusub ku tilmaamey mid kala soocid ku shaabadeysan. Muslimiinta ugu badan ee ku dhaqan dalka Turkiga oo gaaraya 560 000 waxay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Turkiga, waxaana ay taageero badan ka helaan hay’adaha Muslimiinta ee dalka Turkiga.
Mehmet Görmez oo ka mid ah Imaamyada dalka Awsteeriya ayaa sheegaya in xornimada aamisnaanta ama diimaha ee dalka Awsteeriya ay dib u laabatey muddo 100 sano ah.
Si kastaba ha ahaatee sharcigan muranka badiyey ee la mel mariyey marka laga yimaado, dalka Awsteeriya ayaan ka mid ahayn dalalka dhibaatadu ay ka soo gaarto qaar kamid ah dhalinyarada Muslimiinta ee taageersan ururada xagjirka ah.
Dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Switzerland ayaa wada qorshe kan la mid ah oo ah in hayäadaha Muslimiinta ee shisheeyey laga mamnuuco in Muslimiinta dalalkooda joogaa ay taageero siiyaan.
Waxaa jira hay’ado badan oo Kirishtaan ah kuwaas oo deeq gaarsiiyada qaar kamid ah dalal ku yaala Afrika iyo Aisya, waxay gacanta ku hayaan Iskuulo, Kaniisado iyo Isbitaalo, waxaana loo yaqaanaa Missions, dalalka Midowga Yurub ayaana badankood ka socdaan.